Ciyaartoyda u sharraxan abaal-marinta xiddiga bisha June ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey…. (Kooxaha Man United & Wolves oo min labo ku leh) – Gool FM
Haaruun July 3, 2020
(England) 03 Luulyo 2020. Waxaa la shaaciyey ciyaartoyda u sharraxan abaal-marinta xiddiga bishii June ugu fiicnaa horyaalka Premier League, iyadoo labo ka mid ah ay ay ku leedahay Kooxda Manchester United, la mid ah Wolves.
Labada ciyaaryahan ee kooxda Manchester United Bruno Fernandes iyo Anthony Martial ayaa ka soo muuqday liiska xiddigaha lixda ah ee u sharraxan abaal-marinta xiddiga bisha ee horyaalka Premier league.
Xiddigahaan labada ah ee Bruno iyo Martial ayaa fure ahaa kooxda Manchester United tan iyo markii dib loogu soo laabtay ciyaarista horyaalka Premier League kaddib markii hakad loo geliyey faafaha Coronavirus, waxaana ay doonayaan inay horyaalka Premier League kaga dhammaystaan xilli ciyaareedkan afarta sare.
Martial kaasoo dhaliyey saddexleydiisii ugu horreysay xirfaddiisa ciyaareed kulankii ay ka horjeedeen Sheffield United, kaddib markii uu shabaqa soo taabtay kulankii ay 2-0 uga adkaadeen Man City ayaa 14 gool xilli ciyaareedkan sii maraya, iyadoo aysan wax guuldarro ah soo gaarin shan kulan oo uu Man United u ciyaaray bisha June.
Marka laga soo tago Martial iyo Bruno, waxaa jira afar ciyaartoy oo kale oo sameeyay bandhig cajiib ah kuwaasoo liiskan ka soo muuqday.
Xiddigaha kale waxaa ku jira labada ciyaaryahan ee Wolves, Conor Coady iyo Raul Jimenez, xiddiga Kooxda Southampton ee Danny Ings iyo ciyaaryahanka Newcastle United ee Allan Saint-Maximin.